Yakaburitsa chidzidzo chitsva chemoyo mune varwere vane Apple Watch | Ndinobva mac
Sezvo iyo Apple Watch yakaburitswa izvozvi makore matanhatuPanotova neboka rakakosha revanhu, kusanganisira ini, vanogona kudada kuti tiri vapenyu nekuda kwekuti isu takanga takapfeka wachi yeApple pachiuno chedu panguva yakaoma muhupenyu hwedu.
Hukama hwenguva dzose hunowanikwa neApple nemushonga hunozivikanwa kune vese, kuona kuti neshanduro nyowani, vanotibatsira zvishoma kuti tinakirwe noutano hwakanaka. Zvino chidzidzo chitsva chekurapa chemoyo chakangoburitswa icho icho Apple Watch.
Mumwe mangwanani muna Kubvumbi, yangu Apple Watch yakandimutsa pamwe nekudengenyeka kwayo ichindizivisa kune yakaderera kurova kwemoyo. Maka 25 kurova paminiti. Maawa matatu gare gare ivo vakakwanisa kupora zviratidzo zvangu zvakakosha muICU yechipatara. Mangwana acho, ndakavhiyiwa moyo uye pacemaker yakaiswa kuitira kuti imwe "yakaderera" senge yandaive nayo mangwanani iwayo isazoitika zvakare. Inoponeswa nebhero… kubva kuApple Watch yangu.
Uye nyaya iyi haina kuitika kumurume anobva kuMassachusetts kana kumukadzi anobva kuOhio, sezvataigara tichiverenga nguva nenguva, asi zvakaitika Seva. Nguva zhinji ndakafunga izvo zvaizoitika dai ndakanga ndisina tsika yekurara neApple Watch yangu pa. Pamwe ndanga ndisati ndamuka nekuko.
Ndokusaka ini ndichigara ndichiteerera zvakanyanya kune nhau dzine hukama neApple Watch uye mabhenefiti ayo kune hutano hwevanhu. Chidzidzo chitsva ne Chipatara cheStanford yakaburitswa mu PLoS One vhiki ino.
1 110 varwere vakaongororwa
2 Yakashamisa data yakawanikwa
110 varwere vakaongororwa
Demographic hunhu hwevarwere vakadzidza.
Chidzidzo ichi chakashandisa 110 varwere nematambudziko emoyo uye ese akaongororwa kubva kudzimba dzavo neApple Watch nePhones uye yakakosha application yakagadzirirwa iyo.
Iyo data kubva kune imwechete inoratidza kuti izvi zvishandiso zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa kuongorora hushoma hwemotokari yevarwere vemoyo vane chaiyo inoshamisa. Cheki dzakafanana dzakaitwa panguva yekushanyirwa kwekiriniki kupa hwaro hwekuenzanisa nedhata rakawanikwa neApple zvishandiso kubva imba.
Muchidzidzo ichi, data rakawanikwa muyedzo yekufamba kwemaminetsi matanhatu (6MWT) yakaongororwa, pamwe neyakaunganidzwa data rezviitiko kuti riwedzere kana kutsiva bvunzo. 6MWT muchipatara mune varwere vane chirwere chemwoyo.
Kufananidza kuverenga kwakatorwa neApple Watch uye bvunzo pane iyo kiriniki, chidzidzo ichi chakakwanisa kuziva kana Apple inopfekwa inogona kushandiswa kuyera zvine hungwaru kugona kwevarwere.
Yakashamisa data yakawanikwa
Zvinoenderana nekudzidza, iyo Apple Watch aigona kunyatsoongorora iyo inoshanda chinzvimbo chemurwere kusvika 90% senzwi uye 85% kuvimbika.
Pasi pechipatara chinotarisirwa, iyo iPhone neApple Watch neiyo VascTrac app vakakwanisa kunyatsoongorora 'kushaya simba' kwemunhu nekunzwisisa kwe90% uye kusarudzika kwe85%. Kunze kwechipatara munzvimbo isina anotarisirwa, iyo data yakawanikwa kubva ku6MWT yaive 83% yakavimbika.
Passive dhata yakaunganidzwa pamba pemurwere yaive yakatodzana mukufungidzira mashandiro ehunhu senge data rakawanikwa mune ye6MWT bvunzo yakaitwa mukiriniki, iine nzvimbo iri pasi peyakave (AUC) ye0,643 uye 0,704, zvichiteerana.
Chidzidzo chakazogumisa kuti mubatanidzwa weApple Watch uye iyo iPhone inogona kushandiswa zvakakwana kuyera data remwoyo zviri kure pasina kudikanwa kwekushanyirwa kwese chipatara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakaburitswa chidzidzo chetsva chemoyo chakaitwa pane varwere vane Apple Watch